“Waan garaneynaa sida loo garaaco Liverpool” – Sergio Aguero – Gool FM
“Waan garaneynaa sida loo garaaco Liverpool” – Sergio Aguero
(Manchester) 01 Jan 2019. Gooldhaliyaha taariikhiga ah ee kooxda Manchester City Sergio Aguero ayaa ka hadlay kulanka adag ay kula ciyaari doonaan hogaamiyaasha Liverpool, kaasoo ka tirsan kulamada 21 –aad ee Premier League.
Liverpool uu hogaaminayo macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp ayaa waxay ku hogaaminayaan Premier League, iyagoo 7 dhibcood ka sareeya kooxda booska labaad fadhida ee Manchester City.
Hadaba Sergio Aguero ayaa kahor kulankan wuxuu wareysi ku bixiyay shabakada caanka ah ee Sky Sports wuxuuna yiri:
“Waa inaan diirada saarnaa qaab ciyaareedkeena kulankaas, waxaan heysanaa kalsooni buuxda ee ah inaan heysano qaab aan ku guuleysan karno, waana inaan ku raaxeysanaa kulanka soo aadan”.
“Wadadeena xili kasta waxay naga dhigtaa inaan guuleysano isla markaana aan helno dhibco badan, kulanka Liverpool waa inaan badinaa, si aan u soo celino kalsoonidaas, isla markaana aan u sii wadno kalsoonida”.
“Kulamada u dhexeeya kooxaha waaweyn, ee boosas ahaan isku midka ah, xili kasta waa cajiib, mar walbana waxay leeyihiin dabeecad gaar ah, sidaasi darteed waa inaan soo bandhignaa wax walba ee awoodeenu gaarsiisan tahay, kadib marka uu si layab leh isku badalay farqiga inoo dhexeeya anaga iyo Liverpool bisha December”.
"Liverpool kuma guuleysan doonto Premier League xitaa haddii ay 5-0 uga adkaato Man City kulanka Khamiista.".-
Kooxda Arsenal oo guul raaxe leh ka gaartay Fulham xili Aubameyang uu shabaqa gaaray + SAWIRO